Global Voices teny Malagasy · 18 Avrily 2018
Tantara tamin'ny 18 Avrily 2018
Kazakhstan: Mihatanora sy Mihamanjombona Ireo Avara-pianarana
Tsy dia vokatry ny adihevitra ara-pôlitika misokatra loatra ny famadibadihana ireo avara-pianarana sy ireo manampahefana ambony ao Kazakhstan. Manome tany lonaka ahafahan'ireo mpitsikera sy mpandinika mandalina ny antony ambadiky ny famadihana izato na izatsy ireo fialàna sy fametrahan'olona tsimoramora. Kanefa, misy hevitra iraisana: mihatanora hatrany ireo avara-pianarana.
Tondradrano Tao Mumbai
Azia Atsimo18 Avrily 2018
Niaina orana mikija (156mm tanatin'ny 24 ora) i Dhaka tamin'ny voalohan'ity volana ity. Nandrakotra ny ampahefan'ilay tanàna ny ora-nikija ka nampitsahatra ny fiainan'ny olompirenena 10 tapitrisa. Saingy tsy misy manakaiky ilay niainan'i Mumbai tanatin'izay roa andro izay, miaraka amin'ny orana tsy tapaka voarakitra ho 896mm tanatin'ny 24 ora.
Toherin'ny vondron'ny mpanohitra ny fanitarana ny taona fandehanana misotro ronono ho an'ny Filoha amperinasan'ny Vaomiera Misahana ny fifidianana satria tsapan-dry zareo ny fiangarany. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, niezaka ny manampahefana maleziana nanakana ny fanaterana ilay taratasy fitarainana manohitra ny fanalavàn-taona avy amin'ny mpikatroka mafana fo mpanohitra ho ao amin'ny parlemanta....
Nanatri-maso ny herin'ny vahoaka ry zareo Koreanina, niaraka tamin'ny fandroahana ny filoha tamin'ny Martsa lasa teo. Hitan-dry zareo amin'ny endrika #IzahoKoa sy #MiarakaAminao izy amin'ity indray mitoraka ity.
Eoropa Afovoany & Atsinanana18 Avrily 2018
We Matter: Fanentanana amin'ny aterineto mizara fanantenana sy fitsaboana miaraka amin'ny tanora tompotany
Mediam-bahoaka18 Avrily 2018
Ny 'We Matter' dia fanentanana antserasera ao Kanada izay manasa ny tanora tompotany sy ny mpiara-dia aminy mba handefa lahatsary fohy ao amin'ny tranonkalan'izy ireo.
Ny taona voalohany nitondran'i Bachelet tamin'ny naha-Filohan'i Shily azy
Amerika Latina18 Avrily 2018
Raha oharina tamin'ny fitantanan-draharaha teo aloha, dia nihena ny tahan'ny tsy fananan'asa nandritra ny taona voalohany nitondran'i Bachelet ary nitombo ny fampiasam-bola tamin'ny fahasalamana, ny fonenana ary ny fampianarana. Notohanany ihany koa ny lalàna momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy....